" ဖရန့် ဟာ ချယ်လ်ဆီး အတွက် ပြီးပြည့်စုံ တဲ့ ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါတယ် ။ " - ဖာဒီနန် — Sports Myanmar
” ဖရန့် ဟာ ချယ်လ်ဆီး အတွက် ပြီးပြည့်စုံ တဲ့ ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါတယ် ။ ” – ဖာဒီနန်
ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ ၄င်းတို့ ထံမှ ထွက်ခွာဖို့ နီးစပ် နေတဲ့ နည်းပြ မော်ရစ်ဇီယို ဆာရီ ရဲ့ နေရာ မှာ ၄င်းတို့ရဲ့ ဂန္တဝင် ကွင်းလယ်လူဟောင်း ဖရန့် လမ်းပတ် နဲ့ အစားထိုးဖို့ ကြံရွယ် နေပါတယ် ။ ဘွတ်ကီဒိုင် တွေကလည်း ဖရန့် လမ်းပတ် ကိုသာ ရေပန်း အစားဆုံး နည်းပြသစ် ဖြစ်လာဖို့ အဖြစ် တစ် ပေးထားခဲ့ပါတယ် ။
မန်ယူ အသင်း ရဲ့ ခံစစ်မှူး ဟောင်း ရီယို ဖာဒီနန် ကလည်း ဖရန့် လမ်းပတ် ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း အတွက် ပြီးပြည့်စုံ တဲ့ ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဂျူဗီ နည်းပြဟောင်း အယ်လီဂရီ ဟာ အရမ်း တော်တဲ့ နည်းပြ ဖြစ်ပေမယ့် ချယ်လ်ဆီး ပရိသတ် တွေကတော့ လမ်းပတ် ကိုပဲ ခေါ်ယူ စေချင်တဲ့ အနေအထား မှာ ရှိနေကြောင်း သုံးသပ် ပြောဆို ခဲ့ပါတယ် ။
Daily Mirror နဲ့ အင်တာဗျူး မှာ ဖာဒီနန် က ” ဖရန့် ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း အတွက် ပြီးပြည့်စုံ တဲ့ ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါတယ် ။ အကယ်၍ သူတို့ဟာ ဖရန့် ကို မခေါ်ပဲ တခြား တယောက် ကို ရွေးချယ် ခဲ့မယ် ဆို ကျွန်တော် အတော် ကို အံ့သြမိမှာပါ ။ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ နာမည်ကြီး ၊ ထိပ်တန်း နည်းပြ ပေါင်းစုံ နဲ့ အသင်း ကို စမ်းသပ် ကိုင်တွယ်ခွင့် ပြုခဲ့ပြီးပါပြီ ။ ”
” ကျွန်တော် အခု ပြောနေတာ အယ်လီဂရီ ကို မလေးစားလို့ မဟုတ်ပါဘူး ။ သူဟာ ဂျူဗင်တပ် အသင်း နဲ့ အတူ မယုံနိုင်ဖွယ် အောင်မြင်မှု တွေ ရအောင် စွမ်းဆောင် ပေးခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ ကာလို အန်ဆယ်လော့တီ ကိုလည်း ခေါ်ခန့် ခဲ့တယ် ၊ အန်တိုနီယို ကွန်တီ ၊ ဆာရီ ၊ မော်ရင်ဟို တို့ကိုလည်း ခေါ်ခန့် ခဲ့တယ် ၊ သူတို့ ခန့်ခဲ့တဲ့ နည်းပြတိုင်း က တော်ကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် တယောက် မှ ချယ်လ်ဆီး နဲ့ အစေးမကပ် ခဲ့ပါဘူး ။ ”
” ဒါကြောင့်မို့ ဒီလိုမျိုး မန်နေဂျာ တွေ တယောက်ပြီး တယောက် လဲရင်း သံသရာ ဆက်လည် သွားချင်သလား ? ဒါမှမဟုတ် ပရိသတ် တွေ သဘောကျ နှစ်သက်မယ့် ဖရန့် တို့လို သူမျိုး နဲ့ ခရီးဆက်မလား ဆိုတာ စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းနေပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ် ။ ထို့ အပြင် ဖာဒီနန် က ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ ကစားသမားသစ် ခေါ်ယူခွင့် အပိတ် ခံထား ရတဲ့ အတွက် လမ်းပတ် ဟာ ထို အတောအတွင်း မှာ လူငယ် ကစားသမား တွေကို အကောင်းဆုံး ကိုင်တွယ် နိုင်စွမ်း ရှိမယ် လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ဆိုပါတယ် ။
ဖာဒီနန် က ” အကယ်လို့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း လာမယ့် ဘောလုံး ရာသီ မှာ ကစားသမားသစ် ခေါ်ယူခွင့် လုံးဝ မရှိတာ သေချာ ပြီဆိုရင် သူတို့ ဟာ ဖရန့် က လွဲပြီး တခြား နည်းပြ တွေနဲ့ အစားထိုး လို့ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ ဒါဟာ ကျွန်တော့ ဖက်က အရိုးသားဆုံး ဝန်ခံတာပါ ။ အင်္ဂလန် မှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ လူငယ် အကယ်ဒမီ ဟာ အခု နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်လာပါတယ် ။ ”
” သူတို့ရဲ့ လမ်းစဉ် နောက်ကို မန်စီးတီး က ဆက်လိုက် လာပါတယ် ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် နှစ် အတော် ကြာတဲ့ အထိ ချယ်လ်ဆီး မှာ အကောင်းဆုံး လူငယ် ကစားသမား တွေ ပိုင်ဆိုင် ထားပါလျက်နဲ့ တယောက် မှ စီနီယာ အသင်း မှာ မဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါဘူး ။ ကလပ် ဘုတ်အဖွဲ့ အနေနဲ့ ကလည်း ဒီ ပေါ်လစီ ကို ပြောင်းလဲဖို့ စဉ်းစား နေပြီ လို့ ထင်ပါတယ် ။ အကယ်၍ အဲ့လို ပြောင်းလဲ ချင်တယ် ဆိုရင် ဖရန့် က လွဲပြီး တခြား အစားထိုး ရမယ့် နည်းပြ မရှိတော့ပါဘူး ။ ”
” သူဟာ ချယ်လ်ဆီး လူငယ် ကစားသမား တွေ အမြဲ လေးစား အားကျ ရတဲ့ ဂန္တဝင် ကစားသမား လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ သူ့ကို ခန့်လိုက်မယ် ဆိုရင် လူငယ် တွေ အားလုံး လည်း ပိုပြီး စိတ်ဓာတ် တက်ကြွ လာပါလိမ့်မယ် ။ ဖရန့် ဟာ ချယ်လ်ဆီး လူငယ် တွေကို နေရာ ပေးရုံသာမက ချယ်လ်ဆီး ပရိသတ် တွေရဲ့ အသည်းနှလုံး ကိုပါ သိမ်းပိုက် ယူမယ့်သူ ဖြစ်ပါတယ် ။ ချယ်လ်ဆီး အသင်း မှာ အချိန် အတိုင်းအတာ တခု အထိ နည်းပြ တွေဟာ ဖိအား တွေနဲ့ အသင်း ကို ကိုင်တွယ် ခဲ့ကြပါတယ် ။ ”
” ဒါပေမယ့် ဖရန့် ရောက်လာမယ် ဆိုရင် ဒါတွေ အသစ် တဖန် ပြောင်းလဲ သွားမယ် လို့ ထင်မိပါတယ် ။ လူတွေ ကတော့ ဖရန့် ရဲ့ အတွေ့အကြုံ အကြောင်း ပြောကြ ပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် ဘာစီလိုနာ မှာ ပတ် ဂွာဒီယိုလာ ကိုင်တွယ်တုန်း ကလည်း ဖရန့် လို အတွေ့အကြုံ နုနယ် ခဲ့ပေမယ့် ရှိတဲ့ အလားအလာ ကောင်း လူငယ် တွေကို အကောင်းဆုံး စီမံ နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ”
” နောက်ပြီး ဖရန့် ဟာ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ် တွေမှာ နာမည်ကြီး ကစားသမား တွေကြောင့် ဖိအား တွေ များနေ နိုင်မလား ဆိုရင် ကျွန်တော် တော့ မထင်မိပါဘူး ။ ဖရန့် ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း အကြောင်း သေချာ သိထားတာကြောင့် သူ့ကို ကစားသမားတိုင်း က လေးစားမှု အပြည့် ထားကြပြီးသား ဖြစ်ပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ် ။
” ဖရနျ့ ဟာ ခယျြလျဆီး အတှကျ ပွီးပွညျ့စုံ တဲ့ ရှေးခယျြမှု ဖွဈပါတယျ ။ ” – ဖာဒီနနျ
ခယျြလျဆီး အသငျး ဟာ ၄ငျးတို့ ထံမှ ထှကျခှာဖို့ နီးစပျ နတေဲ့ နညျးပွ မျောရဈဇီယို ဆာရီ ရဲ့ နရော မှာ ၄ငျးတို့ရဲ့ ဂန်တဝငျ ကှငျးလယျလူဟောငျး ဖရနျ့ လမျးပတျ နဲ့ အစားထိုးဖို့ ကွံရှယျ နပေါတယျ ။ ဘှတျကီဒိုငျ တှကေလညျး ဖရနျ့ လမျးပတျ ကိုသာ ရပေနျး အစားဆုံး နညျးပွသဈ ဖွဈလာဖို့ အဖွဈ တဈ ပေးထားခဲ့ပါတယျ ။
မနျယူ အသငျး ရဲ့ ခံစဈမှူး ဟောငျး ရီယို ဖာဒီနနျ ကလညျး ဖရနျ့ လမျးပတျ ဟာ ခယျြလျဆီး အသငျး အတှကျ ပွီးပွညျ့စုံ တဲ့ ရှေးခယျြမှု ဖွဈကွောငျး ၊ ဂြူဗီ နညျးပွဟောငျး အယျလီဂရီ ဟာ အရမျး တျောတဲ့ နညျးပွ ဖွဈပမေယျ့ ခယျြလျဆီး ပရိသတျ တှကေတော့ လမျးပတျ ကိုပဲ ချေါယူ စခေငျြတဲ့ အနအေထား မှာ ရှိနကွေောငျး သုံးသပျ ပွောဆို ခဲ့ပါတယျ ။
Daily Mirror နဲ့ အငျတာဗြူး မှာ ဖာဒီနနျ က ” ဖရနျ့ ဟာ ခယျြလျဆီး အသငျး အတှကျ ပွီးပွညျ့စုံ တဲ့ ရှေးခယျြမှု ဖွဈပါတယျ ။ အကယျ၍ သူတို့ဟာ ဖရနျ့ ကို မချေါပဲ တခွား တယောကျ ကို ရှေးခယျြ ခဲ့မယျ ဆို ကြှနျတျော အတျော ကို အံ့သွမိမှာပါ ။ ခယျြလျဆီး အသငျး ဟာ နာမညျကွီး ၊ ထိပျတနျး နညျးပွ ပေါငျးစုံ နဲ့ အသငျး ကို စမျးသပျ ကိုငျတှယျခှငျ့ ပွုခဲ့ပွီးပါပွီ ။ ”
” ကြှနျတျော အခု ပွောနတော အယျလီဂရီ ကို မလေးစားလို့ မဟုတျပါဘူး ။ သူဟာ ဂြူဗငျတပျ အသငျး နဲ့ အတူ မယုံနိုငျဖှယျ အောငျမွငျမှု တှေ ရအောငျ စှမျးဆောငျ ပေးခဲ့ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ခယျြလျဆီး အသငျး ဟာ ကာလို အနျဆယျလော့တီ ကိုလညျး ချေါခနျ့ ခဲ့တယျ ၊ အနျတိုနီယို ကှနျတီ ၊ ဆာရီ ၊ မျောရငျဟို တို့ကိုလညျး ချေါခနျ့ ခဲ့တယျ ၊ သူတို့ ခနျ့ခဲ့တဲ့ နညျးပွတိုငျး က တျောကွပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ တယောကျ မှ ခယျြလျဆီး နဲ့ အစေးမကပျ ခဲ့ပါဘူး ။ ”
” ဒါကွောငျ့မို့ ဒီလိုမြိုး မနျနဂြော တှေ တယောကျပွီး တယောကျ လဲရငျး သံသရာ ဆကျလညျ သှားခငျြသလား ? ဒါမှမဟုတျ ပရိသတျ တှေ သဘောကြ နှဈသကျမယျ့ ဖရနျ့ တို့လို သူမြိုး နဲ့ ခရီးဆကျမလား ဆိုတာ စိတျဝငျစား စရာ ကောငျးနပေါတယျ ။ ” လို့ ပွောကွား ခဲ့ပါတယျ ။ ထို့ အပွငျ ဖာဒီနနျ က ခယျြလျဆီး အသငျး ဟာ ကစားသမားသဈ ချေါယူခှငျ့ အပိတျ ခံထား ရတဲ့ အတှကျ လမျးပတျ ဟာ ထို အတောအတှငျး မှာ လူငယျ ကစားသမား တှကေို အကောငျးဆုံး ကိုငျတှယျ နိုငျစှမျး ရှိမယျ လို့ ယုံကွညျကွောငျး ဆိုပါတယျ ။
ဖာဒီနနျ က ” အကယျလို့ ခယျြလျဆီး အသငျး လာမယျ့ ဘောလုံး ရာသီ မှာ ကစားသမားသဈ ချေါယူခှငျ့ လုံးဝ မရှိတာ သခြော ပွီဆိုရငျ သူတို့ ဟာ ဖရနျ့ က လှဲပွီး တခွား နညျးပွ တှနေဲ့ အစားထိုး လို့ လုံးဝ မဖွဈနိုငျပါဘူး ။ ဒါဟာ ကြှနျတော့ ဖကျက အရိုးသားဆုံး ဝနျခံတာပါ ။ အင်ျဂလနျ မှာ ခယျြလျဆီး အသငျး ရဲ့ လူငယျ အကယျဒမီ ဟာ အခု နောကျပိုငျးနှဈတှမှော အကောငျးဆုံး ဖွဈလာပါတယျ ။ ”
” သူတို့ရဲ့ လမျးစဉျ နောကျကို မနျစီးတီး က ဆကျလိုကျ လာပါတယျ ။ ဘယျလိုပဲ ဖွဈဖွဈ နှဈ အတျော ကွာတဲ့ အထိ ခယျြလျဆီး မှာ အကောငျးဆုံး လူငယျ ကစားသမား တှေ ပိုငျဆိုငျ ထားပါလကျြနဲ့ တယောကျ မှ စီနီယာ အသငျး မှာ မဖွဈထှနျးခဲ့ပါဘူး ။ ကလပျ ဘုတျအဖှဲ့ အနနေဲ့ ကလညျး ဒီ ပျေါလစီ ကို ပွောငျးလဲဖို့ စဉျးစား နပွေီ လို့ ထငျပါတယျ ။ အကယျ၍ အဲ့လို ပွောငျးလဲ ခငျြတယျ ဆိုရငျ ဖရနျ့ က လှဲပွီး တခွား အစားထိုး ရမယျ့ နညျးပွ မရှိတော့ပါဘူး ။ ”
” သူဟာ ခယျြလျဆီး လူငယျ ကစားသမား တှေ အမွဲ လေးစား အားကြ ရတဲ့ ဂန်တဝငျ ကစားသမား လညျး ဖွဈပါတယျ ။ သူ့ကို ခနျ့လိုကျမယျ ဆိုရငျ လူငယျ တှေ အားလုံး လညျး ပိုပွီး စိတျဓာတျ တကျကွှ လာပါလိမျ့မယျ ။ ဖရနျ့ ဟာ ခယျြလျဆီး လူငယျ တှကေို နရော ပေးရုံသာမက ခယျြလျဆီး ပရိသတျ တှရေဲ့ အသညျးနှလုံး ကိုပါ သိမျးပိုကျ ယူမယျ့သူ ဖွဈပါတယျ ။ ခယျြလျဆီး အသငျး မှာ အခြိနျ အတိုငျးအတာ တခု အထိ နညျးပွ တှဟော ဖိအား တှနေဲ့ အသငျး ကို ကိုငျတှယျ ခဲ့ကွပါတယျ ။ ”
” ဒါပမေယျ့ ဖရနျ့ ရောကျလာမယျ ဆိုရငျ ဒါတှေ အသဈ တဖနျ ပွောငျးလဲ သှားမယျ လို့ ထငျမိပါတယျ ။ လူတှေ ကတော့ ဖရနျ့ ရဲ့ အတှအေ့ကွုံ အကွောငျး ပွောကွ ပါလိမျ့မယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဘာစီလိုနာ မှာ ပတျ ဂှာဒီယိုလာ ကိုငျတှယျတုနျး ကလညျး ဖရနျ့ လို အတှအေ့ကွုံ နုနယျ ခဲ့ပမေယျ့ ရှိတဲ့ အလားအလာ ကောငျး လူငယျ တှကေို အကောငျးဆုံး စီမံ နိုငျခဲ့ပါတယျ ။ ”
” နောကျပွီး ဖရနျ့ ဟာ လကေ့ငျြ့ရေး အစီအစဉျ တှမှော နာမညျကွီး ကစားသမား တှကွေောငျ့ ဖိအား တှေ မြားနေ နိုငျမလား ဆိုရငျ ကြှနျတျော တော့ မထငျမိပါဘူး ။ ဖရနျ့ ဟာ ခယျြလျဆီး အသငျး အကွောငျး သခြော သိထားတာကွောငျ့ သူ့ကို ကစားသမားတိုငျး က လေးစားမှု အပွညျ့ ထားကွပွီးသား ဖွဈပါတယျ ။ ” လို့ ပွောကွား ခဲ့ပါတယျ ။